Mkparịta ụka n'etiti USA na Iran? IIPT onye nchoputa na-anwa imeghe mpio
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Mkparịta ụka n'etiti USA na Iran? IIPT onye nchoputa na-anwa imeghe mpio
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na-agbasa News Travel • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • Safety • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • video
Onye nchoputa na onye isi oche nke New York Institutelọ Ọrụ Mba Nile Maka Udo Site na Ntugharị (IIPT), Louis D'Amore na-agwa United States na Iran ka ha jiri ohere ahụ mepee windo a dị warara. O nwere ike inyere aka izere ịbawanye ụba na USA - Iran na-ese okwu n'udo.
Nke a na-abịa n'otu oge mgbe ndị ndu ụwa gụnyere Onye isi ala German Angela Merkel, Onye isi ala France Emmanuel Macron na PM Britain bụ Boris Johnson wepụtara nkwupụta nkwupụta ụtụtụ Mọnde. Pope Francis kpọrọ Sọnde maka mkparịta ụka: “A na m akpọku n'akụkụ niile ka ha debe ọkụ na mkparịta ụka na njide onwe onye ka ọ kwụsị ma zere ndo nke iro. Naanị agha na-eweta ọnwụ na mbibi. ”
Eziokwu ahụ bụ na mkparịta ụka n'etiti mmepeanya na-emegide mmegide nke mmepeanya abụrụla okwu arụmụka. Echiche bụ “Ọgwụgwụ nke Akụkọ Ihe Mere Eme” mekwara ka echiche ahụ bụ́ na esemokwu dị n'etiti ọdịbendị na nke ga-anọchi esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ndị agha, dị ka akụkụ nke ọdịnihu mmadụ. Otu nwere ike ikwu na mkparịta ụka n'etiti mmepeanya abụwo otu n'ime atụmatụ ole na ole nwere ike ịmepụta nnukwu ihe, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị ukwuu, n'ime afọ iri gara aga.
Onye ọ bụla njem nwere ike ịbụ onye nnochite anya maka Udo.
Onye isi ala IIPT gbara ndị isi Iran na US ume ịlaghachi na 2001 Afọ mba ụwa UN maka mkparịta ụka n’etiti mmepeanya dị ka onye bụbu onye isi nke Iran Khatami kwuru.
Afọ iri na abụọ gara aga, onye guzobere IIPT na Onye isi ala, Louis D'Amore nwere ohere - ya na Juergen Steinmetz, onye mbipụta akụkọ eTurbo News - inye agwa ndị isi mba Iran okwu na Islam Hall of the People na Tehran. Isiokwu nke adreesị D'Amore bụ Udo site na njem.
D'Amore malitere okwu ya site n'ikwu na Iran bụ otu n'ime obodo ndị kacha ochie na-aga n'ihu n'ihu ụwa, yana obodo ndị mepere emepe na obodo mepere emepe kemgbe 4000 BC Ọ bụ ala jupụtara n'akụkọ ihe mere eme - ọgaranya na sayensị na teknụzụ - nka, akwụkwọ na ọdịbendị - yana ala ebe ihe karịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị bi n'okpuru 25 - yabụ ala nwere ọdịnihu dị ukwuu.
O kwukwara na na 1998, n'ime ọnwa nke Ramadan, Onye isi ala Iran Mohammad Khatami nyere UN General Assembly iwu na 2001 ka a kpọọ XNUMX Afọ International nke mkparịta ụka nke mba ụwa n'etiti ndị mepere emepe - nke a nakweere.
Onye bụbu president nke Iran
Nzube nke Onye isi ala Khatami dabere n'ezi ọhụụ ya banyere otu esi wuo udo ụwa na ikpe ziri ezi site na ụkpụrụ omume - ụkpụrụ ọhụrụ dabere na ọmịiko na ọmịiko. Ọ dịịrị mmadụ niile ịkpọ gọọmentị na ndị ụwa ka ha soro ụkpụrụ ọhụrụ ma mụta ihe site na ahụmịhe gara aga. Ọ kpọrọ oku ka akparịta ụka n'etiti ndị ọkà mmụta, ndị na-ese ihe, na ndị ọkà ihe ọmụma. Onye isi ala Khatami n’onwe ya rụrụ ọrụ iji wulite mkparịta ụka na nkwukọrịta ofufe n’ime afọ ahụ.
Seyyed Mohammad Khatami rụrụ ọrụ dị ka Onye isi ala nke ise nke Iran site na 3 August 1997 ruo 3 August 2005. Ọ rụkwara ọrụ dị ka Mịnịsta Ala Iran site na 1982 ruo 1992. Ọ bụ onye na-akatọ onye bụbu Onye isi ala Mahmoud Ahmadinejad nke gọọmentị.
Emere ya na ngwụcha narị afọ nke 20 na ebumnuche nke ịhapụ narị afọ jupụtara na enweghị oke, ime ihe ike, na esemokwu - atụpụtara ya n'ebumnuche nke irite uru site na mmeta na ahụmịhe nke mmepeanya niile - yana ikpe ekpere ka anyị bido narị afọ ọhụrụ nke mmadụ, nghọta, na udo na-adịgide adịgide ka mmadụ niile wee rite ngọzi nke ndụ.
N'ime afọ 34 nke akụkọ ihe mere eme, International Institute for Peace site na njem nleta (IIPT) agbawo mkparịta ụka n'etiti ọdịbendị na mmepeanya na mpaghara ala na nkwenye na “Onye njem ọ bụla nwere ike ịbụ onye nnọchi anya udo”Yana ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị isi gọọmentị.
Afọ 2017 UN International Year of Tourism for Sustainable Development na Peace ruo ọtụtụ ebe, ntọala ya gbanyere mkpọrọgwụ na ọrụ nke IIPT kemgbe mmalite ya na 1986 - afọ UN nke Udo UN.
Nzukọ IIPT nke mbụ nke ụwa, Vancouver 1988, bu ụzọ webata echiche nke njem na-adịgide adịgide - na nke ọhụrụ Ihe nlere anya maka ebumnuche kachasị elu nke njem nke ahụ na-emesi ike ọrụ dị mkpa nke njem na:
Na-akwalite nghọta mba ụwa
Mmekọrịta dị n'etiti mba dị iche iche
Ikpuchido gburugburu na iche-iche-iche-iche-iche
Hankwalite ọdịbendị na iji ihe nketa kpọrọ ihe
Mmepe na-adịgide adịgide
Mbelata ịda ogbenye na
Na-agwọ ọnyá nke esemokwu
Dị ka a kọrọ na Akụkọ Akụkọ Wave tupu afọ a, ndị ọrụ njem njem Iran kwuru na njem ga-anọchi ego mmanụ. Edere nke a dịka onye isi oche onye isi ala Iran Ali Asghar Mounesan, onye bụbu onye isi nke Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Organisation, “A nabatara ndị America na Iran. "
Ekwughachiri nke a n'ọtụtụ ozi Facebook, pịa mbipụta na mgbasa ozi email site na ndị ọrụ njem njem Iran. na-achọ azụmaahịa America na Europe.
D'Amore tụrụ aro na adreesị 2008 ya na anyị nwere ohere na ogbako ITOA mbụ a - ịmalite mkparịta ụka n'etiti mmepeanya ọhụrụ - yana njem na njem na-arụ ọrụ dị mkpa na mmezu ya.
Fabio Carbone, IIPT GLobal Nnọchiteanya
N'oge na-adịbeghị anya, site na mbọ nke Dr. Fabio Carbone, onye nchọpụta na-eme nchọpụta nke Center for Trust, Peace, na Social Relations, Mahadum Cambridge, na IIPT Global Ambassador, otu IIPT Iran guzobere na Iran.
Nwa amaala Dr.tali aha ya bụ Dr. Carbone emeela ọtụtụ nzukọ ọmụmụ na nzukọ ọmụmụ nke ndị mahadum, ụlọ ọrụ gọọmentị na ndị njem na-adọta ihe karịrị mmadụ 200 nwere ịnụ ọkụ n'obi n'ọtụtụ n'ime mmemme ndị a.
Louis D'Amore kwubiri, sị: "Dịka m n'onwe m hụrụ na 2008, ndị Iran so na ndị nabatara, ndị na-anabata ndị ọbịa na ndị hụrụ udo n'anya n'ụwa niile."
IIPT ka na-anụ ọkụ n'obi ịlele ọhụụ nke Onye isi ala Khatami nke udo udo na ikpe ziri ezi nke ụwa dabere na ọmịiko na ọmịiko na ọrụ "Peace site Tourism" nwere ike ịrụ na njedebe a.
IIPT Credo nke Onye Udo Na-eme Udo
Obi ekele maka ohere iji gaa ma hụ ụwa ma n'ihi na udo na-amalite site na mmadụ, Ana m ekwupụta ibu ọrụ m na ntinye aka m:
Njem na-emeghe uche na obi dị nwayọọ
Nabata na amara na ekele di iche-iche m na-ahụ
Na-asọpụrụ ma na-echebe gburugburu ebe obibi nke na-akwado ndụ niile
Ghọta ọdịbendị niile m chọpụtara
Sọpụrụ ma kelee ndị ọbịa m maka nnabata ha
Nyem aka m dika onye obula m huru
Kwado ọrụ njem ndị na-ekerịta echiche ndị a ma na-eme ha,
Donald opi IIPT EGO udo site njem nlegharị anya President Donald ụda Ụda Isi Taleb Rifai UNWTO WTTC